အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပူတာအို)တွင် စာသင်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း | Myanmar Tender Portal
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပူတာအို)တွင် စာသင်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
Tender ID: 12146
တင်ဒါကာလ: October 5, 2020 - November 3, 2020
၁။ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပူတာအို) အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်.
(၁) အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပူတာအို)
(က) စာသင်ဆောင် သံကူကွန်ကရစ် (၂) ထပ် (၁၉၂’ x ၃၈’) (၁) လုံး
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၃-၁၁-၂၀၂၀ ၇က်၊ ညနေ ၄ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပူတာအို) တွင် တင်ဒါတင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်.
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတို့တင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအတွက် သတ်မှတ်တင်ဒါအာမခ့ကြေးကို ဗဟိုဘဏ်မှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဘဏ်များတွင် ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီး အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပူတာအို) ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် ငွေသွင်းပြေစာ မိတ္တူကို သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူ တင်သွင်းရမည်။ လုပ်ငန်းတခုထက်ပိုမို၍ တင်ဒါတင်သွင်းလိုပါက မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် တင်ဒါအာမခံကြေးကို ပေးသွင်းပြီး သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ တခုချင်း တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း ဖုန်း -၀၉-၂၆၀၅၂၁၇၁၈ နှင့် ၀၉-၇၈၃၂၂၀၈၁၀ တို့တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။